Adde Asli Oromo with Hegeree Media: Part One | GadaaTube
Adde Asli Oromo with Hegeree Media: Part One
Guyyaa Gootota Oromoo 2011 (DC) – K/ 1ffaa – Obbo Qaxalee Waaqjiraa
Daandii Ragabaa: Kaayyoo Oromoo – Dhimma Guddaa & Murteessaa
Oromo, Ogaden and Ethiopian Communities Protest in Downtown Seattle
Interview: Abduljelil Abdella with Mohammed Raayyaa and Danno Namara
Guyyaa Gootota Oromoo (Atlanta, 2013)
16 Responses to "Adde Asli Oromo with Hegeree Media: Part One"
Simee January 20, 2012 at 6:28 am
Aadde Aslii baga jiraatte….umrii kee haa dheeressu rabbiin ….Oromiyaa shall be free!
Robbale January 20, 2012 at 12:06 pm
Adde Asile Oromo, hirriman qbo tifii gotten, gallnii kee guddha akka dubaritii oromo tokkotii oromoni sinjalatas sinii bonas, dadhabin keetifii kanii qbessawta oromo hundaa oromo biratifii senaa birrati bakaa kana jene akka qabatuu, shakki hin jirru, amas tananii, yada garri gumachunii sabba kee birra akka dhabat”e falimatuu mamii hin qabuu.
jabadhu oromian dhigaa ilmanii isitinii nii biilisomit!
ziyad muhammada January 20, 2012 at 4:42 pm
adee asile rabinii umirii kee nuhadheresuu qabisoo oromoo kaa itii gubatee kaa jiruu kee iratii sijalaa badee tanaa buaa qabisoo tanaa uduu hiniarginii rabinii sihiniajesinii jabadhuu woraa bosonaa kesaa jiranifii abdi gudaa atii fakenaa dubaritii oromo hudatii atii nufii jiradhuu …………………..
Abdi Fite January 20, 2012 at 7:53 pm
wow Asilii….Lubbuu kee dheeressee har’a seenaa kaleessaa odeessuuf si ga’uu isaatiif Rabbiin haa galatu. Intala gaazexeesituu Asilii gaafatte dandeettii addaa qabda Oromoon shamarree akka kee qabaachuu isaatti guddaa gammanna. Hegeree miidiyaa hojii boonsaa itti jirtaniif galata guddaa qabdan.
Lammii January 20, 2012 at 8:49 pm
Galata argadhu! Fuula duras jabaadhu!
Ilma oromoo January 20, 2012 at 10:45 pm
Galatoomi Asili ati lubbuu kee fi yeroo kee mara Oromoodhaaf laatee, intali gaafi si gaafate kanas bilchina fi dandeetti isee hedduun aja’ibsiifadhe!!
Rabbi guddaan ummurii siif haa kennu yaa goota Oromoo!!
Yaadesaa January 21, 2012 at 12:18 am
Jiraadhaa horaa bulaa lamaan keessan iyyuu!
Humbana January 21, 2012 at 5:51 am
Adee Asli Oromo, you are the queen of Oromia. May you live long and take your place in free Oromia!
anonymous January 21, 2012 at 9:33 am
Waaqni umrii ke haadheeressu. Hummata ke irraa galata guddaa qabda. Otoo jagni akka keeti kuni kumaataman jiru biyyi Oromoo gabromtee hinhaftu.
Gootummaa ke fi bilchina siyaasaa ati qabdu heddun dinqisiifadha.
Hirkoo January 23, 2012 at 9:36 am
Addee Aslii baga rabiin lubuun sijirachisee akka dhugaa kana sabaa keettii himtuu sigodhee. Atti jagnaa,goota,kutatuudha. Kan akka kee dhugaan dhabatuu fi lubuu isaa dabarsee kenuu harraa meqatuu jira?. Hidhaa,rebumsaa fi gidiraan halagaa garajabinaan ummataa kenyaa irran ga’uu sodaa malee gotumadhaan afaan kee gutee dubattaa. Egaa baga jiratee,amas jabdhuu Waqayoon kan akkaa kee cimtuu, saboontuu fi beektuu kumaatamaa nuuf haakenuu.
abbaa gammaachiis January 27, 2012 at 11:05 pm
giiftii oromoo horii buli yeroo ati hadhaa qabsoon qabdu teessee himtu gadheen kaleessaa oromootti duulaa turtee har’a ammoo dhuftee maqaa qabsoo oromootiin kamaal gantuun xeebduu mee maaluma jetta atoo haadha keenyaa haadhaa oromooti jabaadhuu karaati jalqabde nutu bakkaan gaha
adron January 29, 2012 at 4:42 am
Hammini TPLF waan saba ummata Oromoo irrati geesisee Addee Aslii sooda malee afaa baasun nutti himun shee baayee kan hajaa’ibu dhaa. Waqnii lubuu kee kan jiraachise fi galani his saf hataa’u
ulaabookhee February 10, 2012 at 12:55 am
aslii teenya umrii harraageessaa siif haa khannu janna!!shamarran oromoo hundi osoo akka kheettii taate jannee hawwina!!!!!!!!!!!!!
Maikel Jamale April 20, 2012 at 8:42 pm
Adde, Asli tenya baguma lubun jirate arra fakkenya dubartota oromo marra tate ya qabsoftu sabba horri bulli amale qabson itti fufa qabsawan ni kufa of bodan debinu amale gabadha jiradha !
ramadan yuya October 21, 2012 at 5:43 am
adde, asli oromo amman dura dhagahu malee waa’ee gotummaa isii garuu ijaan suura isii arkuu kiyyaaf hegere media haalan galatooma ,qabsaa.’ota oromo warreen akka isi kana nuuf keessumachiisu hin dagatinaa
Adde asli oromon rabbiin bilisumma ummata oromoodha ijaan si haa garsiisu ,akka sumaas rabbin umrii kee dachaan siif hadabalu siin jedha,
gallanii rabbiif haagahu kan rabbin rakkaina wayyaanen sirratti gahaa turaniin jalaa baate hawaasa irra dhalatee qabsaawa fi turtee keessati nagaan si deebisee galanni haagahun ja’a.
jabaadhu hamileen si hin cappin itti fufi akkuma kee kan duraani sanitti rabbin sicinaa haa dhaabatu
gaaddisa dhugaa March 29, 2013 at 7:07 am
Wanti jedhan silaa hedduu hunda caalaa baga lubbuun jiraatte.hanga bilisummaa saba keetii ijaan agartutti umrii tee siif haa dheeressu…